प्राकृतिक दही - Thermomix रेसिपी | ThermoRecines
मिठाई604 मिनेट8 व्यक्ति
घरमा प्राकृतिक दही बनाउने बारेमा एउटा राम्रो कुरा के हो भने कुनै विशेष स्वाद वा थपेर तपाईलाई आफ्नो विशेष स्पर्श दिन सक्नुहुन्छ। जाम वा फल, मह, आदि
म पहिले केही प्रतिध्वनिमा एप्पलस होममेड र त्यसपछि दही र अरूहरूमा म केवल किशमिश थप गर्दछु जुन मलाई धेरै मनपर्दछ। साथै मेरी सानी छोरीले तिनीहरूलाई केहि पनि लिई लैजान्छ, पक्कै उनी दही प्रशंसक हुन् पेटीट सुइस y नाटिल्लास.
म तिनीहरूलाई पनि मन पराउँछु, खास गरी मेरो साथी र सहकर्मी मीलाले मलाई नुस्खा दिए र मलाई तयार पार्न प्रोत्साहित गरे। मेरो घरबाट त्यो प्राकृतिक दही उड्यो !!
1 सादा दही
यी प्राकृतिक योगगर्टहरू बनाउनको लागि अविश्वसनीय रूपमा सजिलो।
तयारी समय: 10H
सम्पूर्ण दूधको १ लिटर
स्किम्ड दुध पाउडरको g० ग्राम
गिलासमा, हामी दुध, चिनी र पाउडर दूध थप्दछौं। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, तापक्रम १००º र गति।।
अर्को, हामी कार्यक्रम Seconds सेकेन्ड, गति 15 र हामी मुखमार्फत दही थप्दैछौं।
समाप्त भएपछि हामी नोजलले कभर गर्छौं, थर्मोमिक्सलाई अनप्लग गर्नुहोस् र तातो राख्नको लागि यसलाई दुई कम्बल वा टावलमा कभर गर्नुहोस् र दही सेट गर्नुहोस्। हामी यसलाई १० घण्टाको लागि त्यस्तै छोड्दछौं।
अर्को तरिका दहीलाई चश्मा वा कचौरामा खसाल्नु हो, ओभनलाई º०º मा प्रिहिट गर्नुहोस् र जब यो तापक्रम पुगेपछि हामी त्यसलाई बन्द पार्छौं, दही राख्दछौं र चुलो बन्द छ। हामी तिनीहरूलाई १० घण्टाको लागि चुलीमा राख्छौं।
हामी प्रयोग गर्ने कपको आकारमा निर्भर गर्दै, and र units इकाइ बीचमा बाहिर आउन सक्दछ।
थप जानकारी - एप्पलस / चकलेट पेटिट- suisse / स्ट्रबेरी कस्टर्ड.
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, Years बर्ष भन्दा बढी, Postres
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » Postres » सादा दही
म भर्खर यस ब्लगमा गएँ र मलाई यो एकदम चाखलाग्दो भेटियो। धेरै बेरदेखि मैले दही बनाउने कुरा मनमा राखेको थिएँ, हेरौं कि मैले पनि त्यसो गर्ने आँट गरें। तपाई महान हुनुहुन्छ, कस्तो राम्रो दृश्य !!!!
धेरै धेरै धन्यबाद, Arantxa। हामी तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन परेकोमा धेरै खुसी छौं। हामीलाई हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।
हे, योगगरि फ्रिजमा कति लामो हुन्छ?
अफ्रिकालाई जवाफ दिनुहोस्
तिनीहरू मेरो लागि लामो समय सम्म टिक्दैनन् किनकि मसँग दुई छोरीहरू छन् जो प्रत्येक दिन तिनीहरूलाई खाने गर्दछ, तर मलाई लाग्छ कि उनीहरू एक हप्ताको लागि उत्तम रूपमा समात्छन्। शुभकामना।
मैले तिनीहरूलाई भट्टीमा बनाउने प्रयास गरें र तिनीहरूले पर्याप्त मात्रामा कर्ल गरेनन, मलाई शंका छ किनभने साढे तीन मिनेटमा थर्मोमिक्स degrees० डिग्रीसम्म पुग्न सक्दैन, के यो समस्या हुन सक्छ? वा यो दुध हुन सक्छ किनभने उनीहरूले मलाई भने कि महलको दूध उत्तम छ? धन्यवाद।
नमस्ते जीना म यसलाई पूरै पास्कुअल दुधले बनाउँछु, तर यो चिसो हुनुपर्दैन। उनीहरूले जुन घुमाउरो छ त्यसको बारेमा, तिनीहरू खरिद गरिएकाहरू जस्तो छैनन्, तिनीहरू हल्का क्रीम जस्ता छन् वा मानौं कि हामीले खरीद गरिएको दहीको धेरै पिटे। मैले उनीहरूलाई सँधै थर्मोमिक्स कम्बलले छोपेको छ, तर मित्रले ओभन º०º सम्म पुर्‍याउने विकल्प बनाउँछ र भन्छ कि उनीहरू राम्रो देखिन्छन्। उनीहरू कत्तिको घुम्ने थिए?
नमस्कार हेलेना। मलाई थर्मोमिक्स बेच्ने केटीको बहिनीले मलाई उनीहरूलाई रातै भित्र छोड्नुहोस्, मेशिन अनप्लग गर्नुहोस् र उनीहरूलाई आइसोदरल झोला र कम्बलले छोप्नुहोस् भनेर मैले भनेकी छैन, तर म कुनै दिन यसलाई प्रयास गर्ने छु र यसबारे तपाईंलाई बताउने छु । मेरी बहिनी धेरै घुमाउरो छ तर उनी उनीहरूलाई दही निर्माताले बनाउँछिन्। धन्यबाद।
नमस्ते जीना त्यसोभए म तिनीहरूलाई कसरी गर्छु, म तिनीहरूलाई रातमा रातमा छोड्दछु र दुई-चारवटा ब्लान्केटमा लपेट्छु। दही निर्माता महान छ र मलाई लाग्छ कि म यसलाई चाँडै किन्नेछु। शुभकामना।
तपाईले कम्बलले छोपेको मतलब धन्यबाद
नमस्कार स्यान्ड्रा, Thermomix ले कम्तिमा १० घण्टा तातो राख्नुपर्दछ र यसको लागि म यसलाई कम्बलमा लपेट्छु वा तपाईं यसलाई एक ईएसोथर्मल ब्याग र शीर्षमा कम्बलले कभर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई राती छोड्छु र बिहान यो तयार छ। जहाँसम्म म यो जस्तो देखिन्छु र यो प्रायः गर्दछु किन, म सोच्छु कि तीन बुद्धिमान् मानिसहरूका लागि म दही निर्मातालाई अर्डर गर्ने छु। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। शुभकामना।
तिनीहरू मेरो लागि उत्तम बाहिर आएका छन्! तर मैले केवल 900 ०० दुध बनाएँ। हो, तिनीहरू स्किम्ड छन्, दुध र पाउडर दुध दुवै स्किम्ड छन्।
तिनीहरूले चुलोमा पूरै घुम्ने। पहिले मैले तिनीहरूलाई केही व्यक्तिगत जारमा फाँसी दियो र तिनीहरू स्वादिष्ट थिए!
मलाई यो दही मन पर्छ! म धेरै खुसी छु, बिली। सत्य यो हो कि यो धेरै धनी बाहिर आउँछ। शुभकामना।
olaa kisieraa दही Xro बनाउनुहोस् मलाई थाहा छैन कहाँ स्किम्ड दुध पाउडर किन्न? शुभकामना।
मलाई लाग्छ कि यो लगभग सबै सुपरमार्केटहरू जस्तै क्यारेफोर, डीओए,… मा छ। म यसलाई स्वेल्टेस ब्रान्डबाट किन्छु। शुभकामना।
सबैलाई शुभ र नयाँ बर्षको शुभकामना, यो पहिलो पटक हो जुन मैले यस सेक्सनमा लेखें, र सत्य यो हो कि तपाईं मलाई भान्छाकोठामा धेरै मद्दत गर्नुहुन्छ, यो सजिलो छ र मेरो मान्छेले मैले पकाएको सबै चीज प्रयोग गर्नमा मद्दत गर्दछु। त्यस्तै कोबाला हा हा हा। तपाईको सहयोगका लागि धेरै धेरै धन्यबाद
मारिया, हामीलाई हेर्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई खुशी छ कि तपाइँ हाम्रा व्यञ्जनहरू मनपराउनुहुन्छ। बधाई र २०११ मुबारक!
नमस्कार एलेना म महिनौं को लागी तपाईंलाई पछ्याउँदै छु, तपाईंको काममा बधाई छ।
मलाई दहीसँग एक प्रश्न छ। केहि दिन अघि मैले थर्मोमिक्स पुस्तकबाट बनाइएको विधि बनाएँ, जुन वाष्पीकरण गरिएको दुध (गोब्लेट) को लागि कल गर्दछ।
मैले indicated घण्टा छोडेर संकेत गरिएँ र मैले यसलाई एकदम तरल देखे ...
मैले यसमा पाउडर दूध राखेको देखेँ ... के यसले बढी मोटा बनाउँछ? धन्यबाद।
Eunice लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते युकिन, मसँग धेरै तरल बाँकी छैन, हामी यसलाई चम्चाको साथ खान्छौं, तपाईं यसलाई पिउन सक्नुहुन्न। मैले यसलाई रातभर छोड्छु र दिउँसो सम्म यसलाई फेला पार्दिन। मैले यसलाई ठूलो मोडा कम्बलले छोपेको छु र राम्रो देखिन्छ। खैर, यो संयोग हो तर ब्ल्गमा प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै गर्दा मलाई केही दिन पहिले किसमिसको दही रहेको छ। शुभकामना।
toñi केबरा भन्यो
म जमिनमा सुन्नका लागि एक नुस्खा जान्न चाहन्छु, म थर्मोमिक्स रेसिपी पुस्तकमा कुनै पनि फेला पार्न सक्दिनँ र उनीहरूले सिफारिश गरे कि मँराको खाजा खानु, यदि कसैसँग एक नुस्खा छ भने मँ यो पठाउन चाहान्छु।
Toñi केब्रेलाई जवाफ दिनुहोस्
हेलो तोइ, मसँग छैन तर म एउटा फेला पार्न प्रयास गर्ने छु। शुभकामना।
सबैभन्दा पहिले म तपाईलाई यो भव्य पृष्ठमा बधाई दिन चाहन्छु, मैले पहिले नै धेरै रेसिपीहरू बनाएको छु र ती सबै उत्कृष्ट बनेका छन्, जैतूनको भात उदाहरणका लागि मेरो श्रीमान् "पागल" हुनुहुन्छ ... मसँग एउटा प्रश्न छ, मसँग एउटा प्रश्न छ। 14 महिनाको बच्चा र सत्य यो हो कि म उसको लागि प्राकृतिक दही बनाउन चाहन्छु, तर उसले अझै गाईको दूध पिउन सक्दैन, उसले आफ्नो धुलो दूध संग दूध बनाउन सक्छ? र gr लाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। पाउडर गरिएको अनाजको लागि धुलो दूध जुन म दलिया बनाउँछु?
सबै कुराको लागि धेरै धेरै धन्यवाद! अंगालो
नमस्कार मोनी, मैले यसलाई चलाएको छैन, तर मलाई लाग्छ कि यो उस्तै हुनेछैन। पाउडर दूध भनेको के हो यो घुमाउरो र बाक्लो। प्रयास गर्नुहोस् र मलाई भन्नुहोस्। शुभकामना।
नमस्कार, मैले यो ब्लग पत्ता गरेको एक महिना जति भयो, र अब मेरी छोरी र म सारा दिन भान्सामा बित्दछौं।
मैले पहिले नै प्राकृतिक दही बनाएको छु, तर म जान्न चाहन्छु कि यसलाई स्वादयुक्त दही र कसरी बनाउन सकिन्छ।
हाय अना, म तिनीहरूलाई एक स्वाद दही को उपयोग गरी बनाउँछु। मेरा छोरीहरू वास्तवमा स्ट्रबेरी एक मन पर्छ। शुभकामना।
म जान्न चाहन्छु कि म यसलाई स्किम्ड दुध र चिनी बिना नै बनाउन सक्दछु किनकि म तिनीहरूलाई सँधै खरीद गर्छु। धन्यबाद।
हेलो एन्जलस, मैले यसलाई स्किम दुधले बनाउने कोशिश गरेको छैन। म तिनीहरूलाई सधैं मेरा छोरीहरूको लागि पूर्ण दुधले बनाउँछु। शुभकामना।
नमस्कार, यो पहिलो पटक हो कि मँ टिप्पणी गर्न हिम्मत गर्दछु। मैले थर्मोमिक्स थोरै समयको लागि लिएको छु तर धन्यबाद म धेरै सिक्दै छु, मैले दहीहरु प्रयास गरे तर सत्य यो हो कि तिनीहरू एकदम राम्रो छैनन, किनभने केवल आधा घुमाएको छ, तल पानी पकाइएको छ, I तिनीहरूलाई १२ घण्टाको लागि भट्टीमा छोडियो र भान्साको कपडाले छोपेको छ। शुभकामना।
नमस्कार कार्मेन, यसलाई थर्मोमिक्समा छोड्ने प्रयास गर्नुहोस् राम्रोसँग एक वा दुई मानेटियाले छोपिएको। म प्राय: यो जस्तै गर्दछु र यसले मलाई धेरै राम्रो गर्छ। म यसलाई १० देखि १२ घण्टा सम्म पनि राख्छु। शुभकामना।
नमस्कार! म धेरै दही बनाउँदछु, किनकि मेरो श्रीमान् र मेरो छोरो यसलाई धेरै मन पराउँछन् र म मात्र बनाउन दही किन्छु, नुस्खा पनि तपाईंको जस्तै हो, म नन गिलास स्वादका साथ डेनोन ब्रान्डबाट सामान्य दही प्रयोग गर्दछु, र जब म सबै तत्त्वहरू थप्छु म यसलाई एक चम्मच दही जोड्छु यसलाई घुमाउन मद्दत गर्दछु, म यसलाई दुई झोलाले छोप्छु र hours घण्टाको लागि छोड्दछु, म सामान्यतया यो रातमा गर्छु र बिहान यो उत्तम छ।
नमस्ते जुआना मरियम, म तिनीहरूलाई तपाईं जस्तो बनाउने प्रयास गर्ने छु। हामी तिनीहरूलाई धेरै मनपर्दछौं। शुभकामना।
मसँग एउटा समस्या छ !!!
म तपाईको ब्लग दैनिक हेर्छु; तर एक दिन मैले केहि बनाउन धेरै मिठाईहरू देख्न थाले। मैले PETIT-SUISSE भएको एउटा देखेँ, र आज मैले तिनीहरूलाई किनें, मैले नाम लेखिनँ र अब म नुस्खा फेला पार्न सक्दिन; मैले यसलाई "खोज रेसिपीहरू", "इन्डेक्स रेसिपीहरू" इत्यादिमा जति खोजे पनि, मैले फेला पार्न सक्दिन। के तपाइँ तपाइँको ब्लग मा कुन मिठाई petit-suisse छ याद छ?
नमस्कार आना, सत्य यो हो कि मलाई थाहा छैन यो मिठो के हो। यो केक वा मिठाई हो? के तपाइँ अझै कुनै विवरण याद छ?
यो मिठाई थियो र यो बनाउनको लागि द्रुत थियो
खैर, म खुशी छु कि तपाईं ग्यास्ट्रोब्लोग्समा यस्तो राम्रो स्थितिमा हुनुहुन्छ; तपाईंलाई थाहा छ कि म तपाईंलाई हरेक दिन मतदान गर्छु।
सत्य यो हो कि मलाई सम्झना छैन, आना। म व्यंजनहरू खोज्नेछु यदि मैले यो भेट्टाए भने। शुभकामना।
नमस्कार !! मलाई प्राकृतिक दही मन पर्छ, यो मेरो मनपर्ने हो त्यसैले मैले यसलाई बनाएको नुस्खा देखेपछि ..... विपत्ती, म प्राय जसो थर्मोमिक्सको साथ सबै चीज प्राप्त गर्छु, किनकि यो असम्भव छ, मैले यो पहिले नै दुई चोटी गरिसकेको छु र म एकदम निराश छु! मलाई थाहा छैन ममा के गलत छ, यसले मेरो लागि काम गर्दैन यो सबै भन्छु, म पहिलो पटक अर्ध-स्किम्ड दुध (Lidl finessa) प्रयोग गर्‍यो र मैले सोचे कि यो उही हो, यो actimel जस्तो देखिन्थ्यो। त्यसोभए दोस्रो पटक मैले सम्पूर्ण दुध प्रयोग गर्ने कोशिस गरें, मैले थर्मोमिक्सलाई कम्बलले छोपेँ, बेलुका १० देखि दिउँसो १.22.00० सम्म छोडेको छु! र केहि छैन ...। मानौं यो दुधै हो… ..! म के गर्न सक्छु?? म के गल्ति गर्दैछु? किनकि मलाई यो गर्न मन पर्छ किनकि यो मलाई दही मन परेको छ र म दिनको दुई कम्तिमा पनि खान्छु!
आउनुहोस् हामी के समाधानहरू सोच्न सक्छौ वा चीजहरू जुन म गलत गर्न सक्छु! समय, यो साढे minutes मिनेट हो? त्यो समयको साथ म º०º मा पुगेको छैन, मलाई थाहा छैन किन त्यो हो!
अभिवादन ... र यदि म यो नुस्खाको लागि मसँग आफैसँग रिसाएको छु ... अरु सबैलाई धन्यबाद, तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि म एक शर्त प्रशंसक हुँ !!!
नमस्कार इरेन, जहिले पनि मौसमबाट दूध हालिनुहोस्, फ्रिजबाट होइन र एक मिनेट राख्नुहोस्। कम्बलको साथ गुमाउनुहोस्। मलाई लाग्छ कि यो तपाईंको लागि बाहिर कसरी आयो। साहसी, तपाईंले अर्को पटक कस्तो राम्रो देखिन्छ भनेर देख्नुहुनेछ। शुभकामना।
मैले सबै सामग्रीहरूको साथ दहीको खाम राखें
नमस्कार एलेना !! उत्तम, र मलाई कम्ती प्रकार छ कि मलाई दही कसरी मन पर्छ। मैले कम्पोट पनि राखेको छु, जब म तिनीहरूलाई स्वाद गर्छु म तपाईंलाई भन्नेछु। अभिवादन!
महान, मिला! मँ धेरै खुसी हुन्छु जब तपाईं हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईंलाई व्यंजनहरू मनपर्दछ। शुभकामना।
महान, धेरै मलाईदार कम्पोटको साथ, धनी हुनुको साथै, तपाईं फलफूल पनि खान सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो विचार। धन्यवाद !!
मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यो मन परेको छ, मिला!
नमस्ते राम्रो !!!
मैले आज रात स्ट्रॉबेरी जाम र प्राकृतिक दही बनाए।
जाम, डरावना, के एक भ्रम, बच्चाहरूले दही संग यो खाए।
दही, मैले यसलाई कभर गरेको छु, र मेरो प्रश्न यो छ: के म यसलाई अर्को बिहान ११ बजेबाट 23 बिहान the बजे थर्मोमिक्समा छोड्न सक्छु?
र यदि यो सेट गरिएको छैन, जुन मैले धेरै व्यक्तिहरूलाई देख्छु, तपाईं यसलाई सेट गर्न केहि थप्न सक्नुहुन्छ? के यो तपाईंले यसमा राख्नु भएको गिलासको आकारमा निर्भर हुन सक्छ?
तपाईको ब्लग को लागी धेरै धन्यबाद, म धेरै अंकुश छु !!!
नमस्कार बेलन, मलाई थाहा छ कि तपाईंको दही राम्रोसँग सकियो त्यसैले तपाईंका सबै शंकाहरू मलाई लाग्छ कि तपाईंले पहिले नै समाधान गरिसक्नु भएको छ। म तपाईंलाई धेरै मन पराउँछु! अभिवादन र हामीलाई हेर्नु भएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद।
मैले दही र दर्शक बाहिर निकालेको छु, यो बनावटमा उत्तम छ, सुपर क्रीमी !!!
नुस्खा को लागी धेरै धन्यबाद। म पागल बच्चाहरु छ !!!
म धेरै खुसी छु, बेलन!
नमस्कार इलेना, म जान्न चाहन्छु कि फ्रिजमा कति दिन राखिएको छ? र यदि तपाईंले ताजा फलका टुक्राहरू थप्नुभयो भने, के तिनीहरू त्यस्तै रहन्छन् वा यसको विपरित, तिनीहरू अम्लीय हुन्छन्? मैले तिनीहरूलाई धेरै पहिले बनाइसकेको थिएँ र तिनीहरू राम्रा बाहिर आएनन्, तर अब जब म तपाईंको नुस्खा देख्छु म उनीहरूलाई कसरी बनाउने भनेर हेर्न चाहन्छु। शुभकामना
नमस्कार इम्माक्युलेट, मैले तिनीहरूलाई एक हप्तामा फ्रिजमा राखेको छु, तर घरमा तिनीहरू लामो समय सम्म चल्दैनन्, हामी उनीहरूलाई माया गर्छौं! जब म यसलाई बनाउँदछु म फलका टुक्राहरू थप्दिन, म त्यसलाई खाए पछि, वा मह, वा किसमिस खानको लागि मात्र जोड्छु। मलाई लाग्छ कि यदि तपाईंले फलहरू थप्नुभयो र केही दिनको लागि छोड्नुभयो भने, यो राम्रो हुँदैन, तिनीहरूलाई खानु अघि फलहरू थप्नु उत्तम हो। शुभकामना।
हो निस्सन्देह, कति मूर्ख, तपाईं सही हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन म कसरी पतित भएँ भनेर मैले भन्नु अघि यो गर्नु हुनेछ।
धेरै धेरै धन्यवाद। शुभकामना
ब्ल्गमा बधाई छ।
यो महान हो र थर्मोमिक्सका सबै फ्यानहरूको लागि ठूलो सहयोग हो।
भवदीय धेरै धेरै धन्यवाद
दहीको सन्दर्भमा, मसँग एउटा प्रश्न छ: एक पटक 8 घण्टा बितिसक्यो र दही तयार भयो, तपाइँ यसलाई के गर्नुहुन्छ? यसलाई फ्रिजमा कसरी राख्ने ? के यसले "ब्रेक" र स्थिरता गुमाउँदैन?
म यो बिन्दुलाई सुल्झाउन चाहन्छु र तपाईले यो कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने हेर्नुहोस्।
हेलो कार्लोटा, म तपाईलाई खुसी खुशी छु कि तपाईले हाम्रो ब्लग मनपराउनु भयो र हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धन्यबाद। दहीको सन्दर्भमा, म यसलाई ठूलो जुगमा राख्छु, यसलाई प्लास्टिकको र्यापले कभर गरेर फ्रिजमा राख्छु। यदि तपाईं यो एकरूपता हराउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई दही चश्मामा खन्याउन सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई भट्टीमा किण्न दिनुहोस्, पहिले he०º मा तताइएको थियो। चुम्बन
राम्रो! म योगर्ट र उत्तम बनाउनेतर्फ फर्कें !!! अब म तिनीहरूलाई स्वादको साथ बनाउन चाहान्छु, म कसरी तिनीहरूलाई बनाउने? स्ट्रबेरी दहीको साथ, के यो स्वाद लिन पर्याप्त छ? के ती चकलेटबाट बन्न सकिन्छ?
व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद, जब देखि मैले तपाईलाई खोजेको छु, म खाना पकाउन रोक्दिन !!!
म बेतलेहेमलाई धेरै खुसी छु! स्वाद दही संग तिनीहरू उत्तम छन्। मलाई प्राकृतिक मन पर्छ र म यसमा बिभिन्न चीजहरू थप्दछु, तर स्वादको दहीको साथ तिनीहरू धेरै राम्रा छन्। शुभकामना।
म जान्न चाहन्छु कि पेटिट सुइस कसरी बनाईन्छ, धेरै धेरै धन्यबाद
नमस्कार टेरेसा, हामीसँग पनीर विधि बाँकी छ। शुभकामना।
कारमेन फेनान्डेज रोजो भन्यो
नमस्ते केटीहरू, म यस क्षेत्रमा धेरै नयाँ छु, बिहीबार सम्म मैले वास्तवमै मेरो टीएम प्राप्त गरेन तर के पढिरहेको छु र यी पृष्ठहरूमा हेर्दै गर्दा मलाई लाग्छ कि म भान्छा छोड्ने छैन, हाहाहा। एक साथीलाई सबै धन्यवाद छ जोसँग एक छ र मलाई यसको बारेमा भन्यो, उनले धेरै चीजहरू गरिन्। म तपाईंलाई दहीको बारेमा भन्नेछु, मैले सोचेँ कि त्यो सजिलो थिएन, तर मैले देखेको छु कि हामीले राम्रो खरीद गर्यौं। मलाई खुशी पार्नको लागि अरीलाई धन्यवाद।
कार्मेन फेनान्डेज रोजोलाई जवाफ दिनुहोस्
स्वागत छ, कार्मेन!
यस सानो टिम् परिवारमा मलाई स्वीकार्नु भएकोमा धन्यवाद। हाह। म तिमीलाई भन्दैछु कि म के गर्दैछु। वाउचर ?. मेरो सानो बच्चाले उसलाई मफिनहरू र चकलेटहरू बनाउनका लागि ल्याएको छ। हाहाहा। कस्तो ग्रेहाउन्ड।
स्वागत छ, कार्मेन! तपाईं देख्नुहुनेछ कि मेशिनको कस्तो चमत्कार। शुभकामना।
नमस्ते केटीहरू, आज मैले एक स्ट्रबेरी दहीको साथ दही बनाए तर तिनीहरू स्वाभाविक देखिन्थे, स्ट्रबेरी स्वाद हराएको छ। म कसरी अधिक स्ट्रबेरी स्वाद पाउन सक्छु? हालसालै मैले तपाईंको लागि भान्छा छोडेको छैन!
हेलो बेलेन, तपाईंले पहिले फल प्यूरी बनाउनु पर्छ: २०० ग्रस क्रुश गर्नुहोस्। gr० GR को साथ फलको। 200 सेकेन्डको लागि चिनीको गतिमा। And र min मिनेट / १००º / vel.११ कार्यक्रमहरू। तापक्रम º०º सम्म नपुगुञ्जेल केही मिनेटको लागि चिसो हुन दिनुहोस् र दही नुस्खाको साथ जारी राख्नुहोस्। तपाईं कसरी मलाई बताउनुहुन्छ। शुभकामना।
माफ गर्नुहोस् एलेना, तर के तपाईं फल प्युरी गिलास र दही मिश्रण माथि राख्नुहुन्छ? वा तपाईं यो सबै एक साथ मिसाउनुहुन्छ?
र अर्को तर्फ, त्यहाँ कुनै पाउडर वा थप स्वादहरू केहि समान छन्? किनभने फलफूलसँग तिनीहरू थोरै हुन्छन्, हैन त? मेरो छोरासँग स्ट्रबेरी जामको साथ सादा दही छ र उसलाई यो मनपर्दछ, तर मलाई थाहा छैन कि यो फल प्युरीसँग समान छ कि छैन। धन्यवाद!!!
नमस्कार बेतलेहेम, सबै कुरा मिश्रित छ, तर तिनीहरू कम समयमा रहन्छन्। म यसलाई प्राकृतिक बनाउन र यसलाई जाम, मह, ... संग मिक्स गर्न चाहन्छु। मलाई पाउडरको बारेमा साँच्चिकै केही थाहा छैन। शुभकामना।
Mª येशू भन्यो
नमस्कार, म यो थर्मोमिक्समा नयाँ छु र मैले अझै प्रयोग गरेको छैन, म बेलनलाई भन्न चाहान्छु कि उनीहरू स्ट्रबबेरी सुगन्ध तरल र रंगीन पाउडरहरू मिठो बनाउँदछन्, मैले यसलाई दही निर्मातामा दही बनाउनका लागि प्रयोग गरेको छु र उनीहरूले खरिद गरेको, अभिवादन जस्तै स्वाद बाहिर आउनुहोस्
Mª Jesús लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यवाद म येशु
एनाबेलेन ११५ भन्यो
नमस्ते! मैले धेरै महिनादेखि यो नुस्खा बनाइरहेको छु र ती स्वादिष्ट छन्, मैले अर्ध दुध पनि प्रयोग गरें जुन अलि बढी तरल हो तर राम्रो मात्र, समस्या यो हो कि उनीहरूले मलाई वशमा राख्दैनन्। सबै समान छ र केहि छैन… .. मलाई अब के गर्ने थाहा छैन…।
Anabelen115 लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार अना बेलन, कस्तो अनौठो कुरा… यदि तिनीहरू यति राम्रोसँग बाहिर निस्के भने… के तपाईंले दूधको ब्रान्ड परिवर्तन गर्नुभयो? त्यो यदि होईन भने ... म वर्णन गर्दिन। वा त्यो पहिले गर्मी थियो र अब तपाइँ यसलाई चिसो भएको बेलामा गर्नुहुन्छ र त्यसैले उनीहरू घुमाउदैनन ... म मात्र एउटा विवरण भेट्टाउन सक्दिन ... हामीलाई बताउनुहोस् कि हामी पत्ता लगाउन सक्छौं भने! हामीलाई लेख्न र हाम्रा व्यंजनहरु बनाउनु भएकोमा धन्यवाद छ।
दही तयार पार्नुहोस् तर यो घुमाउरो हुदैन, म यसलाई केन्द्रीत बनाउन के गर्नेछु र यसरी मिश्रण हराउँदिन।
यार्मिरिलाई जवाफ दिनुहोस्
अब तपाईंले जिलेटिनको she पानाहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ यसलाई घुमाउनको लागि।
१. -1--3 मिनेटको लागि चिसो पानीमा राखेर जिलेटिन हाइड्रेट गर्नुहोस्।
२. दही र जिलेटिनलाई शीशामा हाल्नुहोस् र seconds सेकेन्डको वेग mix मा मिसाउनुहोस्।
कार्यक्रम minutes मिनेट, तापमान ,०, गति 3।
यसलाई केही गिलासमा राख्नुहोस् र केही घण्टाको लागि फ्रिजमा भण्डार गर्नुहोस्।
भाग्य, तपाईले मलाई भन्नुहुनेछ कि यदि हामीले उनीहरूलाई ठीक गर्न सकेनौं!
आइन्स पाकी, त्यो मलाई जस्तो लाग्छ ... सत्य यो हो कि यो उनको बिना मलाई धेरै खर्च हुन्छ। के अधिक हो, कहिलेकाँही मलाई लाग्छ कि अर्को मेरो लागि महान हुनेछ !!
हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा र तपाईको टिप्पणीका लागि धन्यबाद।
उनीहरूले हामीलाई थर्मोमिक्स दिए जब हामीले विवाह गर्‍यौं सुरुमा हामी अनिच्छुक थियौं तर अब हामी यो बिना बाँच्न सक्दैनौं। हामीसँग months महिना भइसकेको छ र हामी अब बिहानको खाजामा कुनै पनि संतरे निचोरेनौं, थर्मोको साथ जुस अचम्मै बाहिर निस्कन्छ।
म घरेलु दही बनाउन चाहान्छु तर म दही निर्माता किन्न चाहन्न र मैले यो नुस्खा देखेपछि म खुशी भए। हिजो जब हामी उठ्यौं हामी हाम्रो कम्बल र चमत्कारको थुप्रो हेर्न गयौं! हामीसँग दही थियो। यो स्वादिष्ट छ र हामीले स्किम दुध र कुनै चिनी बिना यो गरेका छौं।
मैले के जान्न चाहेको थिएँ कि अर्को पटक दही बनाउने हो भने, यो दही प्रयोग गर्न सकिन्छ वा हामीले किन्नु पर्छ?
म loos h म तिनीहरूलाई त्यसो गर्छु।
१ लिटर दूध, १०० ग्राम पाउडर दूध र दही
गिलासको सबै चीज र १० मिनेट degrees ० डिग्रीदेखि 10 सम्म राख्नुहोस्, यो समाप्त भएपछि, चश्मा र फ्रिजमा राख्नुहोस्, जब उनीहरू चिसो हुन्छन् र चिनी वा स्वादका लागि जाम बनाउँदछन्। तिनीहरू धेरै राम्रा छन्।
फेलालाई जवाफ दिनुहोस्
कति राम्रो Ferla, तिनीहरू स्वादिष्ट हुनुपर्छ र म जाम को स्पर्श मन पर्छ! तपाईको योगदानका लागि धेरै धेरै धन्यवाद, हामी निश्चित रूपमा उनीहरूलाई परिक्षण गर्नेछौं। 🙂
म दही निर्मातालाई प्रयोग गर्दछु र उनीहरू अति उत्तम देखिन्छन्। मैले दुई भिन्नताहरू प्रयास गरेको छु: पाउडरको दूध बिना र अर्ध-स्किम्ड दुधको साथ र तिनीहरू सँधै स्वादिष्ट बाहिर आउँदछन्। निस्सन्देह, यदि तपाईं पाउडर दुध प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरू खरिद गरेको दही जस्तै हुन्। नुस्खा को लागी धन्यवाद!
दलिया बाचेमल, शाकाहारी र ग्लूटेन-मुक्त